मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, एमाले र पूर्वमाओवादीलाई समेटेर कोको बन्दैछन् नयाँ मन्त्री ? – Nepalpostkhabar
मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, एमाले र पूर्वमाओवादीलाई समेटेर कोको बन्दैछन् नयाँ मन्त्री ?
नेपालपाष्ट खबर । २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:१२ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग राखेका ६ वटा मन्त्रालयमा थप मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्ने भएका छन् । आइतबार बेलुकासम्म थप मन्त्री नियुक्तिका लागि अहिले बालुवाटारमा छलफल जारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालयमा चुनाव गराउन सक्ने भरपर्दो पात्रको खोजी गरेका छन् । यसक्रममा महेश बस्नेतको नाम चर्चामा आए पनि प्रहरी संगठनले उनलाई नरुचाएपछि खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना बढेको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
तथापि बस्नेतले भने पार्टीलाई सफल बनाउनका लागि आफूले। गृहमन्त्री पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन् । गृहमा कर्ण थापाले पनि दाबी गरेको बुझिएको छ । एमालेका पूर्वसांसद नारदमुनि राना मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । राना कैलालीबाट काँग्रेस नेतृ आरजू राणालाई चुनाव हराएर सांसद बनेका व्यक्ति हुन् ।
राष्ट्रियसभामा पराजित पूर्वमाओवादीका चन्द्रबहादुर खड्कालाई मन्त्री बनाएर पूर्वमाओवादीको चित्त बुझाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली लागका छन् ।